कसरी लिने अनुदान ? | eAdarsha.com
कसरी लिने अनुदान ?
पीडितले सम्झौतापछि पहिलो किस्तामा ५० हजार पाउनेछन् । त्यसपछि घरको जग र टाइबिम सकेपछि दोश्रो किस्ता वापतको एक लाख ५० हजार वितरण हुनेछ । तर यसका लागि प्राविधिकको सिफारिस आवश्यक पर्छ ।
छाना छाउनुभन्दा अघि तेश्रो किस्ताको थप एक लाख गरी तीन लाख रुपैयाँ रकम घर पूर्ण क्षति भएको भूकम्पपीडितले प्राप्त गर्नेछन् । भूकम्पमा घर भत्किएर निर्माण भइसकेको भए पनि प्राविधिक प्रक्रियाअनुसार भए नामावली हेरेर त्यस्ता भूकम्पपीडितले एकै किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ रकम बुझ्न पाउँछन् ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका एक र दुर्इ ग्रेडको तल्लो स्तरले कुनै रकम पाउँदैनन् । दुर्इ ग्रेडको माथिल्लो स्तरदेखि तीन ग्रेडको तल्लो स्तरसम्म मर्मतका लागि भनेर एक लाख उपलब्ध हुनेछ भने तीन ग्रेडको माथिल्लो स्तरदेखि पाँच ग्रेडसम्मका भूकम्पपीडितलाई पुननिर्माणका लागि तीन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइने छ । अनुदान पाउने भूकम्पपीडितको नाममा जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गरेको बैंकमा प्राधिकरणले खाता खोलेर पैसा जम्मा गरिदिन्छ । त्यसपछि पीडितले फोटो, नागरिकता र सम्झौतापत्रसहित बैंकमा सर्म्पर्क गर्नुपर्छ ।